रोचक – Gorkhali Dainik
विवाहकै अर्को रोचक सामग्री पढेर टाइटल संग सबन्धित भिडियो हेरौ। नेपाली समाजमा विवाह पूर्व बच्चा जन्माउनुलाई गैरका’नुनी मानिन्छ। तर छिमेकी देश भारतको राज’स्थान तथा गुजरातको एक सम्प्रदा:यमा कुमारी आमा’हरुले विवाह पूर्व नै बच्चा जन्मा’उनै पर्ने चलन रहेको छ।भारतको गुजरा’तमा बस्ने गरासिया समुदा:यमा बिहे अगाडी नै बच्चा जन्माउनु पर्ने चलन रहेको छ। यस समुदायमा ब:यस्क केटाकेटीहरु विवाह पूर्व नै लिभ इन टुगेदरका रुपमा बस्ने गर्छन्। जब महिला गर्भव:ती हुन्छिन् त्यस समयमा मात्र उनीहरु बीच विवा’ह गरिन्छ। यसरी लिभ इन टुगेदरको रुपमा बस्दा उनी:हरुले सन्तान उत्पादन गर्न सकेनन् भने त्यस्तो अवस्थामा उनीहरुको बिहे नहुने चलन रहेको छ। यस पछि बच्चा जन्माउ:नका लागि अ:र्को जोडी खोज्ने चलन समेत रहेको छ। यसलाई दापा प्रथा पनि भन्ने गरिन्छ। जुन हजा:रौँ वर्ष पहिले देखि नै चलि आएको छ। यस समुदायमा प्रचलित एक मेलामा युवा
अध्ययन अनुसार महिलाहरुले केही कुरा सधै गोप्य नै राख्ने गरेको पाइएको छ । ती के के हुन धेरलाइ थाहा हुदैन । गोप्य कुराको नजिकका साथी र श्रीमानलाइ समेत थाहा हुदैन । – एक महिलाले अर्की महिलाको डाहा गर्दछन् तर पुरुषलाई यो थाहा हुदैनकी एक महिलाले अर्की महिलालाई मन पराउछन् । उनीहरुले अर्की महिलाको सौन्दर्य स्टाइललाई शरिरको फिगरको पनि डाहा गर्ने अध्यनले देखाएको छ । – महिलाहरुले आफनो पुर्व प्रेमीप्रति चासो राख्ने गरेको एक अध्ययनले देखाएको छ । महिलाले उनको पहिलो ब्याइफेण्डसंग कुन केटीसंग अफेयर चलेको छ । यो केटी आएपछि केटाको जीवनमा के परिवर्तन हुदैछ भने चियो चर्चा गर्छन् । – पो-र्न फिल्म प्रति चासो : महिलाहरु पोर्न फिल्म हेर्न मन पराउने गरेको अध्यनले देखाएको छ । उनीहरुले लुकी लुकी पो-र्न फिल्म हेर्ने गरेको अध्यनले देखाएको छ । – आफनो शरिरलाई माया : महिलाहरु आफनो शरिरलाई देखाउन चाहन्छन् ।आफन
विश्वको अनौठो रुख …..जहाँ पैसा फल्छ…..रुखको रोचक रहस्य…!
एजेन्सी। पैसा फल्ने रुख तपाईले कहिल्यै देख्नुभएको छ ? पैसा रुखमा फल्दैन भन्ने कुराको अपवादको रुपमा रहेको रुख बेलायतको पीक जिल्लामा रहेको छ । १७०० वर्ष पुरानो हो र यो रुखभरी हजारौंको संख्यामा सिक्का गाडिएका छन् । खास कुरा त के भने यहाँ बेलायती मात्रै होइन संसारका हरेक देशका सिक्का जोडिएका कारण यो रुख बहुमूल्य बन्दै गइरहेको छ ।यो रुखमा सिक्का लगाउँदा सुख शान्ति आउने र मनोकामना पूरा हुने विश्वासका साथ दिनानुदिन सिक्का खोप्नेको संख्या बढ्दै गइरहेको छ । वेल्स राज्यको पोर्टमोरियन गाउँमा भएको यो रुख चर्चित पर्यटकीय स्थल बनिसकेको छ जहाँ यो रुखलाई हेर्नकै लागी भनेर दैनिक कैयौँ पर्यटक जाने गर्दछन् ।
मान्छेको जस्तै दात, जिब्रो भएको माछा…….भाइरल…!
अहिले सम्म त तपाईले मानिसको जस्तो अनुहार भएको कुकुर देख्नु भयो तर कहिले मानिसको जस्तो दात भएको माछालाई देख्नु भएको छ ? पक्कै पनि देख्नु भएको छैन होला, सायद तपाइलाई त सुन्दा नै अचम्म लागिरहेको हुनसक्छ । तर अचम्म नमान्नुस् यो एकदमै वास्तविक र सत्य हो । ढाइ किलोको यो माछाको दात मानिसको सरह नै छ । साधारणतया माछाको दात भनेको लामो तिखो हुने गर्छ तर यो माछाको दात मानिसको जस्तै चेप्टो र केनाइन युक्त छ । नर्थ अमेरिकामा पाइएको सो माछा फ्लोरिडाको तालमा भेटिएको थियो । सो माछा पहिलो पटक २०१० मा नर्थ क्यालोरीनामा देखिएको थियो भने पनि यसको कुनै प्रमाण भेटिएको छैन । तर आजकल फ्लोरिडामा यस माछालाई मानिसले देखेर अचम्म मान्ने गर्छन् ।मेट्रो डट को डट यूके का अनुसार सो माछा केटफिश जस्तो लागेपनि यो शीपशेड प्रजातीको हो । मानिसहरु यस माछालाई हेर्न पाउदा अचम्मका साथै रमाइलो पनि मान्ने गर्छन् । https://
एजेन्सी । ५ महिनाकी गर्भवती बालिकासँग धुमधामका साथ विवाह सम्पन्न भएको छ । घटना हो चीनको हेनान प्रान्तको ।जहाँकी एक गर्भवती बालिका र उनको बालप्रेमीबीच सम्पन्न विवाहको भिडियो अहिले चिनियाँ सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भैरहेको छ । पाँच महिनाकी गर्भवती ती बालिकाले आफ्नै उमेरका १३ वर्षीय प्रेमीसँग परम्परागत रूपमा विवाह गरेको भिडियो सामाजिक संजालमा आएको समाचार संस्था सिन्ह्वाले उल्लेख गरेको छ । चीनको कानुनअनुसार विवाह गर्न महिला २० वर्ष तथा पुरुष २२ वर्षको हुनुपर्ने भए पनि कानुन विपरित गरिएको विबाहलाई समाजले भने मान्यता दिएको छ ।
सन् १८५० मा जंगबहादुर राणा बेलायत गएका थिए । उनीसँगै ठूलो टोली थियो, २५ जनाको । त्यति बेला बेलायतीहरूका लागि जंगबहादुर ठूलो सनसनी सावित भएका थिए । द टाइम्सले लेखेको थियो, ‘महारानीसामु प्रस्तुत हुने उच्च जातिका हिन्दु उनी नै पहिलो हुन् ।’ सबै स्रोत यस्तै भन्छ । त्यो अर्थमा सबैले मान्ने गरेका छन्, जंगबहादुर नै बेलायत पुग्ने पहिलो नेपाली हुन् । तर, होइनन् । इतिहासमा भेटिएको नवीनतम तथ्यले भन्छ, उनीभन्दा अगाडि कोही अर्कै नेपाली बेलायत पुगिसकेका थिए । त्यही तथ्यअनुसार ऐतिहासिक घटनाको यसरी कल्पना गर्न सक्छौं । जंगबहादुर र उनको टोलीले बेलायतमा खुबै मोजमस्ती र घुममाम गर्‍यो । यस्तै कुनै दिन उनी लन्डन घुमिरहेका थिए । उनले बाटोमा भेट्टाए, आफूजस्तै नेपाली । आफूजस्तै नेपाली बोल्ने मोतीलाल सिंह । जंगबहादुर कति उत्साहित भए होलान् ? मोतीलाल कति खुसी भए होलान् ? उनीहरूले कसरी कुराकानी सुरु गरे होल
जिब्रोले चाटेर आँखाको उपचार गर्ने विश्वकै बृद्ध डाक्टर, जो ८० वर्षमा पनि जवानहरुले जसरी काम गर्छिन्..!
एजेन्सी । ८० वर्षको उमेरमा मानिसले काल कुर्दै भगवानको नाम जपिरहेका हुन्छन् । तर बोस्नियाकी ८० बर्षिय नाना हावा नामकी वृद्ध भने यो उमेरमा पनि उस्तै गरी सक्रिय छिन् । पेशाले उनी डाक्टर नभएपनि उनले आँखाको उपचार गर्दै आएकी छिन् । तर कुनै औषधी र झारफुकबाट नभई आँखाले चाटेर । नाना हावाले अहिलेसम्म ५ हजार व्यक्तिको आँखाको समस्यालाई जिब्रोले चाटेर ठिक पारिदिइन् । आँफुसँग जिब्रोमा अद्धितिय कला भएका कारण आँखामा आएका समस्यालाई निधान गरिदिन सक्ने क्षमता भएको उनी दाबी गर्छिन् । उनको उपचारमा उनी बृद्ध, असहाय र बेरोजगारलाई कुनै शुल्क लिँदिनन् । तर अन्य मानिसहरुलाई भने न्युनतम १० युरो फि लिँदै आएको डेलिमेलसँगको अन्तरवार्तामा बताएकी छिन् । मुख्य रुपमा आँखामा धुलो, सिसा, फलाम, कोइला, लगायतका बस्तुहरु उनले सजिलै जिब्रोले निकाल्दै आउकी छिन् ।]
एजेन्सी । लामो समयसम्म जागिर नपाएपछि पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तको गुज्रनवाला जिल्लाका ५० वर्षीय मेहमुदले आफ्ना खानाका रुपमा घाँसलाई रोज्न पुगे । २५ वर्षअघि उनी जागिरको दौडधुपमा रहँदा नपाएपछि उनले घाँस खान थालेका हुन् । एक अन्तरवार्तामा उनले गरिवीका कारण आफ्नो परिवार ठूलो समस्यामा फसेका कारण सडकमा बसेर माग्न भन्दा घाँस खानु नै बेस भनेर उनले घाँस खान सुरु गरेको बताए । जागिर नभएकाले आफ्ना आधारभूत आवश्यकता पूर्ती गर्न नसक्ने भएपछि घाँस खान बाध्य भएको बताइरहँदा उनी निकै भावुक देखिएका थिए । हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार भरियाको रुपमा काम गर्दै आएका मेशमुदले दैनिक ६ रुपैयाँ आम्दानी गर्दै आएका छन् । तर २५ वर्षदेखि घाँस खाँदै आएका उनी अहिलेसम्म बिरामी परेका छैनन् ।
एजेन्सी । ८० वर्षको उमेरमा मानिसले काल कुर्दै भगवानको नाम जपिरहेका हुन्छन् । तर बोस्नियाकी ८० बर्षिय नाना हावा नामकी वृद्ध भने यो उमेरमा पनि उस्तै गरी सक्रिय छिन् । पेशाले उनी डाक्टर नभएपनि उनले आँखाको उपचार गर्दै आएकी छिन् । तर कुनै औषधी र झारफुकबाट नभई आँखाले चाटेर ।नाना हावाले अहिलेसम्म ५ हजार व्यक्तिको आँखाको समस्यालाई जिब्रोले चाटेर ठिक पारिदिइन् । आँफुसँग जिब्रोमा अद्धितिय कला भएका कारण आँखामा आएका समस्यालाई निधान गरिदिन सक्ने क्षमता भएको उनी दाबी गर्छिन् । उनको उपचारमा उनी बृद्ध, असहाय र बेरोजगारलाई कुनै शुल्क लिँदिनन् । तर अन्य मानिसहरुलाई भने न्युनतम १० युरो फि लिँदै आएको डेलिमेलसँगको अन्तरवार्तामा बताएकी छिन् । मुख्य रुपमा आँखामा धुलो, सिसा, फलाम, कोइला, लगायतका बस्तुहरु उनले सजिलै जिब्रोले निकाल्दै आउकी छिन् ।
ज’न्मिदा छोरा….१७ बर्षमै स’र्जरीपछिका तस्विरले दुनियाँ मोहित….!
अहिले एक तस्विरको खुबै चर्चा भइरहेको छ । ज-न्मदा पुरुष तर स्वभाव महिलाको भएपछि मात्र १७ बर्षमा जैज जेन्निग्सले ठूलो कदम उठाइन् । उनले आफ्नो लिं-ग पुष्टि गर्ने सर्ज-री गर्ने निर्णय लिइन् । त्यसको करिब २ बर्षपछि उनले आफ्नो पूर्ण कद स्वि’मिङ्ग सूटमा खिचेर साझा गरेकी छिन् । त्यहाँ सर्ज’रीको नि’शान देखिन्छ । यो तस्विरमा उनी विश्वका कुनै सुन्दरी भन्दा कम छैनन् । उनी चर्चित रियालिटी शोहरुका लागि अभिनय गर्छिन् । उनलाई रियालिटी स्टार तथा ट्रा-न्सजेण्डर एक्टिभिस्टका रुपमा चिनिन्छयसैले यो संसारभरी चर्चाको विषय बनेको छ । जैज अहिले मात्र १९ बर्षकी भइन् । उनी चर्चित रियालिटी शोहरुका लागि अभिनय गर्छिन् । उनलाई रियालिटी स्टार तथा ट्रान्स-जेण्डर एक्टिभिस्टका रुपमा चिनिन्छ । उनको इन्ष्टाग्राममा उक्त तस्विरहरु पोष्ट भएपछि सुन्दरताको तारिफमा कमेण्टको ओइरो लागेको छ ।